I-Trasti ye-Nevada yeTrasti yeTrasti, igqwetha kunye neendleko
Yintoni i-Nevada Asset Protection Trust?
Amathemba okhuselo lweeaseti zeNevada zizithembiso zokuzisebenzisa ezizinzileyo. Oku kuthetha ukuba unokuhlawula ukuthembana kunye nokuxhamla kwiiasethi. Ngaphezu koko, unokukwenza kokubini kwaye ukonwabele ukukhuselwa kwababolekisi okanye kwiinkundla zamatyala. Nje ukuba ugqithise ii-asethi kwi-Nevada Protection Trust, emva kweminyaka emibini idlulile, ukuthembela kukhusela ubutyebi bakho kubabolekisi. Ukuba upapasha ukuhanjiswa kweeasethi kwi-trust, kwiphephandaba I-Nevada, umzekelo, kuyalinciphisa ixesha elibekiweyo kwiinyanga ezintandathu. Ke, emva kokuphelelwa ngummiselo wokuphelela, ukuthembela kuvala iiasethi zakho ngaphakathi. Yiyo loo nto, abantu obatyala imali bengakwazi ukufikelela kubo ukuze banelise isigwebo.
Kukho imida embalwa kakhulu yabathengi abathembekileyo; okoko ungakhange uqalise ukuthembela ukurhwaphaza abatyali abaziwayo kwaye udibana nemigaqo elula yokusebenza, umthetho okhuselayo weNevada unokukunika izibonelelo ezifanelekileyo zokukhusela iimpahla. Ubuncinci itrasti enye kufuneka ingumhlali waseNevada onoxanduva lokugcina iirekhodi, ukufayilisha iifom zerhafu. Umntu waseNevada kufuneka ngokuyintloko athembeke. Umntu okwimo ye-Nevada kufuneka abe ngumphathi oyintloko wokuthenjwa.
Iingxowa zoKhuselo lweAset
Imibutho kunye neeManyano
Ukusekwa kweAkhawunti yeBhanki
Iinkqubo zeTyala leShishini
Sinikezela eyona Nevada
iinkonzo kunye zasimahla
Ukukhuselwa kobutyebi kunye nolawulo oluNgxamisekileyo
Iindawo zokuhlala zethembiso (wena) zinolawulo olukhulu (lwamandla) kwinto yokuthembela, ngakumbi kwindlela itrasti eyenza ngayo ukuhambisa abaxhamli. Awunakuyalela ngqo itrasti ukuba ihlawule rhoqo kwiziko elithembayo. Ukuba unakho, ijaji inokunyanzela ukuba usebenzise loo mandla ukuhambisa imali kwiintshaba zakho ezisemthethweni. Unako, nangona kunjalo, unokucela ukuhanjiswa kwenziwe. Ngapha koko unokuba namandla e-veto ngaphezulu kokuhanjiswa kwabanye abaxhamli abathembekileyo. Oku kuvumela indawo yokuhlala ethembekileyo ukuba ihlale kwisitulo somqhubi ngexesha lokuhanjiswa kweeasethi. Unobude beengalo ubude bokuphembelela ixesha kunye nenani lolwabiwo ngokwakho.
Olunye uxolo lwengqondo olwakhelwe kule mithetho kukukwazi kweendawo zokuhlala ezithembakeleyo ukuba zisebenze njenge “trasti yentsebenzo.” Ngokwenjenje, ungalawula ngokunganyanzelekanga kwaye utyale ii-asethi zakho zethembiso. Elinye inqaku ngamandla okususa kunye nokutshintsha iTrasti yakho. Okokugqibela, unokufumanisa ukuba i-trust isasaza njani ii-asethi xa i-makazi igqitha kwinto esiyibiza ngokuba "ngamandla okuqesha".
Indawo ethembekileyo yokukhuselwa kwee-asethi intsha intsha e-US kwaye ambalwa amazwe athe enza umthetho wokukhuselwa kwempahla. Iingcaphephe kudala zisazi i-Nevada njengendawo yolawulo-enoburhulumente enomthetho wokudibana kunye nemithetho ye-LLC. Iinkundla ezingqine ukuxhasa isigqubuthelo sobumbano. Ngoku, i-Nevada iphumele ngaphandle njengegunya lekhaya lokukhetha ukuseta ukuthembela kukhuseleko lweeasethi. Kuya kuba yiminyaka ethile ngaphambi kokuba umthetho wamatyala uqhubeke. Nangona kunjalo imithetho ye-Nevada icacile kukhuseleko abalunikezela ngentembeko ekhuselekileyo kunye ne-asethi ethembekileyo yokukhuseleka.
Kuyatshiwo ukuba iNevada ibonelela ngesona sikhokelo somthetho sakha nokugcina ukuthembela kukhuseleko lweeaseti. Kwi-2010 Nevada i-asethi yokukhuselwa kwempahla yafumana i-A + yokushicilelwa ngumagazini weForbes, ogqwesileyo kwisizwe kwaye ekuphela komgangatho wokufumana amanqaku u-A + nge13.
Akukho rhafu yengeniso kurhulumente
Akukho rhafu yorhulumente
Ummiselo omfutshane kakhulu kwimida ekudlulisweni kwezinto zexabiso (iminyaka eyi-2), enokuthi ibe mfutshane njengeenyanga ze6 ukuba yenziwe kakuhle.
Bonke abatyalwayo bavinjwe ekufikeleleni kwimpahla ye trust, kubandakanya i-alimony, inkxaso yomntwana, izigwebo, njl.
Owona mgangatho uphezulu wobungqina; Nawuphi na umntu obolekayo ocela umngeni kugqithiso lweeaseti kufuneka anike ubungqina obucacileyo nobukholisayo benjongo yokuqhatha
Ukukhuselwa kweeasethi zekhaya
Nceda ugcine engqondweni, ukuthembela kukhuselo lwee-Nevada ngokuyintloko kubahlali baseNevada abanee-Nevada asethi. Umthetho wamatyala awukhangeleki kakuhle ukuba i-makazi ihlala kwelinye ilizwe. Sibonile iijaji zisithi, “Andikhathali nokuba uNevada unale migaqo. Asinazo apha eCalifornia, New York, njl. Njl. Njl. Njl.
Ke, sithini isisombululo kubahlali abangahlali eNevada? Ewe, umbutho wethu unelizwe kuphela "I-Trigger Trust." Leyo yitrasti yitrasti yasekhaya, esekwe e-US de kube kuqhawuka umthetho. Ke amatrasti agqibe kwelokuba anyanzelise igatya lokubaleka aze aguqule ukuthembela kwisixhobo esomeleleyo somhlaba wokhuselo lweeasethi… .a ukuthembeka kwe-Cook Islands. Iilayisensi zethu, ezinamaphepha-mvume, ezinamatyala, kunye nezomthetho weCyprus Islands kunezinyathelo zokugcina njengetrasti. Itrasti kaNevada iya kufuneka ilandele imiyalelo yenkundla yase-US. Ngonotrasti welinye ilizwe, kwelinye icala, akufuneki balandele imiyalelo yenkundla yelinye ilizwe, kwaye banokwala ukuguqula ngaphezulu iimpahla zetrust kutshaba lwakho olusemthethweni.
Igqwetha kunye neenkampani zethembiso zimisela ukuthembeka kweNevada. Ungatsalela umnxeba kule nombolo ingentla kwaye ubuze imibuzo kubacebisi abaziingcali abanokukukhokela kwaye uphendule imibuzo yakho. Ngenye indlela, unokugcwalisa enye yeefom zokubonisana simahla. Omnye wabameli bethu unokwenza idrafti yokunyaniseka ye-taylormade kwiimfuno zakho.
Yahlula isiCwangciso sakho sokuKhusela iiasethi
Ukuba sele unesicwangciso sokukhusela ii-asethi kwindawo, ukuthembela kweNevada, okanye okungcono, ukuthembela okubangela ukubonelela ngokwahluka kwisicwangciso sakho. Eyona mithetho iphambili yokukhuselwa kwempahla yehlabathi iphakamise ukusasazwa kobutyebi bakho xa ujikeleze kwizithuthi ezininzi zokukhusela iimpahla nakwimimandla emininzi yokukhuselwa kwempahla. Oku kuyakwenza ukuba umchasi wakho osemthethweni alwe umlo kumacala amaninzi, ongeze iindleko ezinkulu kwiindleko zomthetho zokulandela ubutyebi bakho. I-Nevada trust okanye trigger trust inokuphembelela nasiphi na isicwangciso sokhuselo lweeasethi, kude nonxweme okanye ekhaya.
Thetha kwingcali yenkonzo yaseNevada namhlanje, ukubonisana simahla ngexesha lomsebenzi eliqhelekileyo, fowunela i-1-888-444-4412